အချစ်ဇာတ်လမ်း ( ဂုဏ်ယူတယ် , လေးစားပါတယ် ).... ~ ITmanHOME
09:19 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
အချစ်ဇာတ်လမ်း ( ဂုဏ်ယူတယ် , လေးစားပါတယ် )....
oမ်းနည်းစရာအချစ်ဇာတ်လမ်း ? or ဒါပေမယ့်ဂုဏ်ယူတယ် ။လေးစားပါတယ်
သမီးရည်စားအတွဲတစ်တွဲမှာ ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ဘယ်အရာရာမဆို
တစ်ရက်… နှစ်ယောက်ပင်လယ်ပြင်ကို အပျော်စီးသင်္ဘောနှင့် အလည်သွားချိန်မှာ
သင်္ဘောမှောက်သွားတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနှင့် ပျဉ်ပြားတစ်ချပ် သူတို့
“ ဓါးသေးသေးလေးကို ထုတ်လာပြီး
“ကြောက်ပါဘူး၊ ငါးမန်းတွေလာရင်ငါဒီဓါးနဲ့ ထိုးလိုက်မယ်” လို့ပြောတော့
ကောင်မလေးက ခေါင်းလေးခါပြီး ရီတယ်…….. :))
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သင်္ဘောတစ်စင်းလည်း သူတို့ မျောလာနေတာကို
ပြီးတော့ တစ်ဖက်မှာ ငါးမန်းတွေလည်းလာနေတယ်….
ကောင်မလေးက “ငါတို့ အစွမ်းကုန်ကူးခက်ကြရအောင်”
အဲဒီအချိန်မှာ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကို ပျဉ်ပြားပေါ်ကတွန်းချလိုက်ပြီး......
“ဒီတစ်ခါငါအရင်ကူးမယ်ဆိုပြီး” ထွက်သွားတယ်….တစ်ယောက်တည်း ကူးသွားတယ်….
ကောင်မလေးမှာ ပြောမတတ်လောက်အောင် အ ပြီးကျန်ခဲ့တယ်….(ပျဉ်ပြားပေါ်ကတွန်းချလိုက်တာကို)..ငကြောက်..
..ကောင်လေးဟာ ငါးမန်းတွေဝန်းရံနေတဲ့ကြားမှာ ကူးခက်ရင်း......
သင်္ဘောသားတွေ က ထိုအချိန်မှာ ကောင်မလေးကို ကယ်တင်လိုက်တယ်….
သင်္ဘောcaptain က “ကောင်မလေး၊ သူဟာ ငါတွေ့ ဖူးတဲ့လူတွေထဲမှာ အရဲရင့်ဆုံးပဲ
ကောင်မလေးကဆိုတော့ သင်္ဘောcaptain က “ဟာ
ဘာလို့လဲ၊ နင်တို့ကို ကယ်မလို့ အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ ကြည့်နေတာ၊
နင့်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီး သူ့လက်ကိုသူ ဓါးနဲ့ ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်လိုက်တယ်….
ငါးမန်းဆိုတာ သွေးညှိနှံ့ကို ချက်ခြင်းသိတာ…
သူသာဒီလိုမလုပ်ရင် နင်လည်း ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး………
( လူတိုင်းလူတိုင်း အချစ်အတွက်ဆိုအားလုံးကိုပေးဆပ်ရဲကြပါတယ်။ ဖော်ထုတ်မပြတာ ပဲံရှိတာပါ...